Gịnị Na-eme Mmadụ Ma Ọ Nwụọ? | Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Bislama Bissau Guinean Creole Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kachin Kikamba Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Kyangonde Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mongolian Moore Myanmar Nepali Norwegian Nyungwe Nzema Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tongan Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Baịbụl sịrị na “ndị dị ndụ maara na ha ga-anwụ; ma ndị nwụrụ anwụ amaghị ihe ọ bụla ma ọlị.” (Ekliziastis 9:5; Abụ Ọma 146:4) N’ihi ya, mmadụ nwụọ, onye ahụ na-akwụsị ịdị adị. Onye nwụrụ anwụ agaghị echeli echiche, ọ gaghị emeli ihe ọ bụla, ihe agaghịkwa emetụli ya n’ahụ́.
‘Ọ bụ n’ájá ka ị ga-alaghachi’
Mgbe Chineke na-agwa nwoke mbụ bụ́ Adam okwu, o kwuru ihe na-eme ma mmadụ nwụọ. Mgbe Adam nupụchaara Chineke isi, Chineke gwara ya, sị: “Ájá ka ị bụ, ọ bụkwa n’ájá ka ị ga-alaghachi.” (Jenesis 3:19) Tupu Chineke ‘ejiri ájá si n’ala’ kpụọ Adam, Adam adịghị adị. (Jenesis 2:7) Ọ bụkwa ihe mere mgbe Adam nwụrụ. Ọ laghachiri n’ájá, kwụsịzie ịdị adị.
Ọ bụkwa otu ihe ahụ na-eme ma mmadụ nwụọ taa. Lee ihe Baịbụl kwuru banyere ụmụ mmadụ na ụmụ anụmanụ. Ọ sịrị: “Ha niile na-aga n’otu ebe. Ọ bụ n’ájá ka ha niile si, ọ bụkwa n’ájá ka ha niile na-alaghachi.”—Ekliziastis 3:19, 20.
Ma, ọ pụtaghị na onye ọ bụla nwụrụnụ nke ya agaala
Baịbụl na-ejikarị ọnwụ atụnyere ụra. (Abụ Ọma 13:3; Jọn 11:11-14; Ọrụ Ndịozi 7:60) Onye nọ n’oké ụra anaghị ama ihe na-emenụ. Ọ bụkwa otú ahụ ka onye nwụrụ anwụ na-anaghị ama ihe ọ bụla. Ma, Baịbụl na-agwa anyị na ọ gaghị ara Chineke ahụ́ ịkpọlite ndị nwụrụ anwụ otú ahụ ọ na-anaghị ara ahụ́ ịkpọte onye na-ehi ụra. (Job 14:13-15) N’ihi ya, a gaghị asị na nke ndị Chineke ga-akpọlite n’ọnwụ agaala.